Goynta iyo daloolinta Boholaha Hawo-qaadista Hawo-goyska oo leh Laser - Laser Dahab ah
Goynta iyo daloolinta Boholaha Hawo-qaadista Hawo-goyska oo leh Laser
Miisaan khafiif ah, nuugista buuqa, maaddooyinka nadaafadda leh, oo sahlan in la ilaaliyo, astaamahan oo dhami waxay dardar geliyeen dhiirrigelinta nidaamka kala-bixinta hawada marada ah tobankii sano ee la soo dhaafay. Sidaas darteed, dalabkii loogukala firidhida hawada maro waa la kordhiyay, taas oo caqabad ku noqotay wax soo saarka waxsoosaarka warshadaha kala firdhinta hawada.
Hufnaan iyo tayo sare leh ee goynta leysarka ayaa fududeyn kara habraacyada dharka lagu shaqeynayo.
Codsiyada firdhinta hawada, inta badan waxaa jira laba shey oo caadi ah, bir iyo dhar, nidaamyada dhuumashada birta dhaqameed waxay ku sii daayaan hawo dhinaca faafiyayaal bir ah oo dhinac dhinac ka raran. Hawada waxaa lagu jiheeyaa aagag gaar ah taasoo keenta isku-dhafnaan hawo yar oo hawo ah oo ku jirta meesha la haysto oo badanaa keenta qoris iyo baro kulul ama qabow; halkaFaafinta hawada marada ah waxay leedahay godad isku mid ah oo ay weheliso dhammaan nidaamka kala firdhisa dhererka oo dhan, iyadoo siineysa kala firidhida hawada ee joogtada ah oo isku mid ah meelaha bannaan ee la haysto.Mararka qaar, godad yar-yar oo daloollan oo ku yaal marinnada waxyar mari kara ama aan la mari karin ayaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo hawo si xawli ah u socota. Kala firidhida hawada oo isku mid ah macnaheedu waa isku dhafnaan hawo wanaagsan oo keenaysa waxqabad wanaagsan meelahaas u baahan hawo.
Dharka kala firdhinta hawada ayaa runtii ah xalka ugu fiican ee hawo qaadashada halka ay caqabad weyn tahay in godadka joogtada ah laga dhigo 30 yaard oo dhaadheer ama ka dheer xitaa maryaha waana inaad jarjar gogo 'ka sokow sameynta godadka. Kaliya laser ayaa xaqiijin kara hawshan.
Goldenlaser ayaa si gaar ah loogu talagalay mashiinada leysarka CO2 ee fuliya goynta saxda ah iyo daloolinta marinnada hawo-qaadashada dharka ee laga sameeyay dharka qaaska ah.
Faa'iidooyinka Hawada Laser ee Hawada Hawada Hawada
Siman oo nadiif ah geesaha jarida
Goynta godadka kala firidhsan si joogto ah ugu habboon sawirka
Nidaamka rarka ee si otomaatig ah u shaqeynaya
Goynta, daloolinta iyo micro daloolinta hal hawl
Farsamaynta rogrogmi kara - u jajab cabbir kasta iyo qaabab kasta oo naqshadeysan
Ma jiro xirmo qalab - sii wad jarista tayada si joogto ah
Si otomaatig ah u xirmay geesaha la jaray ayaa ka hortagaya xoqidda
Sax ah iyo dhakhso u shaqaynta
Ma jiro boodh ama wasakh
Noocyada Qalabka Mashiinka Mashiinka Caadiga ah ee Fiditaanka Hawada oo Ku Haboon Goynta Laser iyo Daloolinta
Polyether Sulfone (PES), Polyethylene, Polyester, Nylon, Glass Fiber, iwm
Galvo iyo Gantry Integrated CO2 Mashiinka Laser
• Waxay ka kooban tahay leysarka gantry (goynta) + laser xawaare sare leh oo galvanometric ah (daloolin iyo calaamadeyn)
• Si otomaatig ah uga baaraandegidda otomaatigga iyadoo laga kaashanayo quudinta, qalabka wax lagu raro iyo hawo wareejinta
• Daloolin, daloolin yar iyo goyn sax ah oo xad dhaaf ah
• Goynta-xawaaraha sare ee godadka daloolka badan muddo gaaban gudahood
• Wareegyo goyn joogto ah oo otomaatig ah oo dherer aan xad lahayn ah
• Si gaar ah loogu talagalay habka leysarka ee dharka gaarka ah iyo dharka farsamada
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaala talino wax badan oo ku saabsan Mashiinka Mashiinka Goynta Laser iyo Daloolinta Laser ee Mashiinnada Dharka.
La xiriir Hada!